Nhau - Chokwadi pamusoro penzvimbo yemheni uye yekugadzira
Mumakore mashoma apfuura, zvimwe zvitsva zvakaitwa mumunda wegreen green. Kwete chete kuti isu tinokwanisa kuwana sarudzo dzakawanda dzakachena uye dzisina chepfu yekuchengeta ganda, kuchengetedza bvudzi uye zvigadzirwa, asi isu zvakare tinoona mabhenji achichinjisa tarisiro yavo mukugadzira zvigadzirwa zvinogadzirika zvechokwadi uye kuputira, zvingave zvichishandiswazve, zvichizadzikiswa kana kuti zvichishandiswazve zvinogona kuora.
Kunyangwe paine kufambira mberi uku, pachine zvinoita sechinhu chimwe chete pazvinhu zvekunakisa, kunyangwe chiri chimwe chezvinhu zvinokuvadza zvakanyanya nharaunda. Glitter inowanzoshandiswa muzvizoro uye chipikiri chechipikiri. Yakavewo chinhu chinozivikanwa muzvinhu zvedu zvekushambidza, sunscreens uye kuchengetwa kwemuviri, zvinoreva kuti inozopedzisira yapinda mumigwagwa yedu yemvura uye yotibata sekumhanyira kwayakaita. Nyika yakakonzera kukuvara kwakanyanya.
Neraki, pane dzimwe nzira dzakatipoteredza dzine hushamwari. Kunyangwe isu tingave tisina chero mapato ezororo kana mimhanzi mitambo mune inoonekwa ramangwana, ino inguva yakanaka yekuchinja kubva kupurasitiki flash zvinhu. Pazasi, iwe unowana inotungamira flash raira (dzimwe nguva yakaoma).
Kusvika pari zvino, isu tinoziva zvizere nezve dambudziko rekusvibisa repasirese uye zvinokanganisa mapurasitiki mugungwa. Zvinosuruvarisa, iyo inopenya inowanikwa mune yakajairika runako uye hwega zvigadzirwa zvekuchengetedza ndiyo mhosva.
“Kupenya kwechinyakare kwakanyanya microplastic, inozivikanwa nekukuvadza kwayo nharaunda. Ipurasitiki diki inoshamisa, "muvambi weAether Beauty uye aimbova mukuru wedhipatimendi rekutsvagisa nekusimudzira reSiphora Tiila Abbitt akadaro. “Kana zvimedu zvakanaka izvi zvikawanikwa muzvizoro, zvakagadzirirwa kuyerera pasi petsvina yedu, zvichidarika nepasefa yega yega, uye zvozopedzisira zvapinda munzira dzedu dzemvura nemumakungwa, nokudaro zvichiwedzera dambudziko riri kukura rekusvibisa microplastics. . ”
Uye haina kumira ipapo. “Zvinotora zviuru zvemakore kuora uye kuora microplastics iyi. Vanokanganisa chikafu uye vanodyiwa nehove, shiri uye plankton, vachiparadza zviropa zvavo, zvichikanganisa maitiro avo, uye pakupedzisira zvichitungamira kurufu. . ” Abitt akadaro.
Izvo zvakati, zvakakosha kuti mabhenji abvise mapurasitiki-based glitter kubva kune avo mafomati uye vatamire kune dzimwe sarudzo dzesimba. Pinda iyo inogona kuora.
Sezvo kudiwa kwevatengi kwekusimudzira uye aesthetics kuri kuramba kuchikura, mabhenji ari kutendeukira kune zvakasvibirira zvigadzirwa kuti zvigadzirwa zvavo zviwedzere kupenya. Sekureva kwaAubri Thompson, akachena runako kemisiti uye muvambi weRebrand Skincare, kune mhando mbiri dze "eco-hushamwari" glitter iri kushandiswa nhasi: chirimwa-chakavakirwa uye chicherwa-chakavakirwa. Iye akati: "Kupenya kunoiswa muzvirimwa kunotorwa kubva kune cellulose kana zvimwe zvigadzirwa zvinowedzerwazve, uye ipapo zvinogona kuiswa dhayi kana kuputirwa kuti zvive nemaruva akanaka." “Kupenya-zvicherwa-zvichibva kunobva kumaminera emicoa. Ivo vane iridescent. Izvi zvinogona kucherwa kana kugadzirwa murabhoritari. ”
Nekudaro, idzi nzira dzechivanhu dzinopenya hadzisi idzo dzakanakira nyika, uye imwe neimwe sarudzo ine kuomarara kwayo.
Mica ndeimwe yesarudzo inoshandiswa zvakanyanya mumaminerari, uye indasitiri iri kumashure kwayo irima. Thompson akati kunyangwe iri, ndeyechisikigo izvo hazvikonzere iyo microplasticity yepasi, asi iyo nzira yekuchera seri kwayo inzira-inowedzera simba ine nhoroondo refu yehunhu husina hunhu, kusanganisira kushandiswa kwevana. Ichi ndicho chikonzero mabhurani akaita saAether naLush anotanga kushandisa synthetic mica kana synthetic fluorophlogopite. Izvi zvakagadzirwa murabhoritari zvinoonekwa zvakachengeteka neye cosmetic ingredient yekuongorora nyanzvi pani, uye yakachena uye inopenya kupfuura yakasikwa mica, saka iri kuramba ichiwedzera kufarirwa.
Kana iyo mhando inoshandisa yakasikwa mica, tsvaga (kana kubvunza!) Kuti usimbise yetsika yayo cheni yekupa. Vaviri Aether uye Beautycounter vanovimbisa kuunza mica inoitisa kana vachishandisa zvigadzirwa zvechisikigo, uye iyo yekupedzisira iri kushanda nesimba kugadzira shanduko dzakanaka muindasta yem mica. Kune mamwewo maitiro ehunhu hwemaminerari sosi sosi, senge sodium calcium borosilicate uye calcium aluminium borosilicate, ayo akagadzirwa madiki, ane ziso-akachengeteka borosilicate magirazi maflakes ane mineral coating uye akagadzirwa nemaBrand akadai saRituel de Fille anoshandiswa muzvizoro.
Kana zvasvika pakurima-kwakavakirwa kupenya, zvirimwa zvinowanzo shandiswa mu "biodegradable" yakawanda inopenya uye zvigadzirwa zvejel nhasi, uye mamiriro aya anova akaomarara. Cellulose yaro inowanzo kutorwa kubva pamiti yakaoma yehuni senge eucalyptus, asi, sekutsanangura kwakaita Thompson, zvimwe chete zvezvigadzirwa izvi ndezvechokwadi kuti zvinogona kuora. Mapurasitiki mazhinji achiri nechishoma chemapurasitiki, anowanzo kuwedzerwa seyeuvara nekupenya, uye anofanirwa kuve akagadzirwa nemaindasitiri kuti awore zvachose.
Kana zvasvika kune inopenya inogadzirwa nemafuta, kuchenesa girini kana kushambadzira kunonyengera kunozivikanwa pakati pezvigadzirwa zverunako uye vagadziri kuti zvigadzirwa zviitwe zvine hushamwari pane zvakatipoteredza kupfuura zvazviri chaizvo. "Chaizvoizvo, iri idambudziko rakakura muindasitiri yedu," akadaro Rebecca Richards, mukuru wezvekutaurirana we (chaizvo) iyo biodegradable flash brand BioGlitz. “Takasangana nevanogadzira manyepo ekuti vanogadzira zvinopisa zvekuora, asi pachokwadi vakaita kupenya kwaive kwakakwanisika mumaindasitiri. "Iyi haisiyo mhinduro nekuti tinoziva kuti hupfu hunopenya haumbofi hwapinda muindasitiri ye Compost."
Kunyangwe "compostable" ichinzwika sesarudzo yakanaka pakutanga, zvinoda kuti mupfuri aunganidze ese akashandiswa zvigadzirwa zvivakwa uye ozovatumira kunze-chimwe chinhu zvakajairika mafeni mafeni asingakwanise kuita. Uye zvakare, sekutaura kwaAbbitt, maitiro ekugadzira manyowa anotora anopfuura mwedzi mipfumbamwe, uye zvinoita zvisingaite kuwana nzvimbo inogona kugadzira chero chinhu panguva ino.
"Takanzwawo nezvemamwe makambani anoti anotengesa zvinhu zvinovheneka zvinogadzirwa nemweya zvisingapfuurike, asi vachizvisanganisa nemagirazi epurasitiki kudzikisa mutengo, uye makambani anodzidzisa vashandi vavo kutsanangura zvinhu zvavo zvinopenya sezvinhu" zvinodzikira ". Nemaune kuvhiringidza vatengi vanogona kunge vasingazive nezve "Mapurasitiki ese anoderedzwa, zvinoreva kuti anozoputsika kuita zvidimbu zvidiki zvepurasitiki. "Richards akawedzera.
Mushure mekupinda mukutaura nenyaya dzemhando dzakawanda, ndakashamisika kuona kuti sarudzo inonyanya kufarirwa ine hushoma hwepurasitiki uye inongova mamaki ekutanga mu "akanakisa anogadzirwa nemafuta anopenya", asi mapurasitiki aya Haawanzotengeswa. Vachizvishandura senge zvinogadzirwa nehuori, vamwe vachitozvishandura kunge zvigadzirwa zvisina plastiki.
Zvisinei, zita racho harisi nguva dzose risina kururama. Thompson akati: "Muzviitiko zvakawanda, izvi zvinokonzerwa nekushaikwa kweruzivo pane huipi." “Zvikwata zvinotambidza ruzivo kuvatengi vazvo, asi zvigadzirwa hazviwanzo kuona mavambo nekugadzirwa kwezvinhu zvisina kugadzirwa. Iri idambudziko kune iro rese indasitiri kusvikira iyo mhando Inogona kugadziriswa chete kana vatengesi vachidikanwa kuti vape pachena pachena. Sevatengi, zvatinokwanisa kuita kutsvaga zvitupa uye maemail brand kuti uwane rumwe ruzivo. ”
Imwe mhando yaunovimba nayo kune biodegrade pachayo ndeye BioGlitz. Kubwinya kwaro kunobva kumugadziri Bioglitter. Sekureva kwaRichards, ichi chiratidzo parizvino ndicho chete chinopenya chinogadzirwa nemweya munyika. Iyo yakachengetedzwa yakakohwa eucalyptus cellulose inomanikidzwa kuita firimu, yakadhayiwa nemasikirwo ezvisikwa zvipfeko, uye zvobva zvanyatso kudimburwa kuita akasiyana siyana maseru. Zvimwe zvakakurumbira zvinomera-zvinobva pamabhenekeri mabhureki ayo anonyatso kuora (kunyangwe hazvo zvisiri pachena kuti ungashandisa Bioglitter) anosanganisira EcoStardust neSunshine & Sparkle.
Saka kana zvasvika kune dzimwe nzira dzekutsvagisa, ndeipi sarudzo yakanyanya kunaka? Richards akasimbisa: "Kana tichifunga mhinduro dzisingagumi, chinhu chakakosha kutarisa maitiro ese ekugadzira, kwete chete mhedzisiro." Uine izvi mupfungwa, ndokumbira uve pachena pamusoro pemaitiro ako uye ugone kusimbisa kuti zvigadzirwa zvavo zviripo. Tenga ipapo yezvinhu zvinogadziriswa zvigadzirwa. Munyika mune zviri nyore kuteedzera mhando yemhando kuburikidza nevezvenhau, isu tinofanirwa kutaura pamusoro pezvatinonetseka nezvatinoda. "Kunyangwe iri basa rakaoma kuona kuti ndezvipi zvigadzirwa zvisina kukuvadza kupasi redu, pane kungozviti zvigadzirwa zvisiri zvekushambadzira, tinokurudzira vese vatengi vane ruzivo uye vane hanya kuti vadzidze zvakadzama makambani avanotsigira, bvunza mibvunzo, uye usambofa wakavimba nekuchengetedzeka pamusoro. ”
Mukupedzisira, chakanyanya kukosha ndechekuti sevatengi, isu hatichashandise echinyakare mapurasitiki ekupenya zvinhu, uye isu tinofanirwa zvakare kutarisisa kuwanda kwezvigadzirwa zvatinowanzotenga. Thompson akati: "Ndinofunga nzira yakanakisa ndeyekuzvibvunza kuti ndezvipi zvigadzirwa zvinoda kuti zvive nemagirazi anopenya." “Ehe, pane zvimwe zvigadzirwa zvingadai zvisina kufanana pasina izvozvo! Asi kudzikisa kushandiswa chinhu chipi zvacho chehupenyu hwedu. Kubudirira kwakasimba kunoitika. "
Pazasi, yedu inodiwa inogara yakasimba cheki chigadzirwa chaunogona kuvimba nesarudzo iri nani uye nehungwaru hwepasi redu.
Kana iwe uchida kumutsidzira yako ecology asi uchinzwa kusagadzikana, BioGlitz's Explorer Pack inogona kusangana nezvaunoda. Iyi seti ine mabhodhoro mashanu epurasitiki-isina eucalyptus cellulose glitter mumarudzi akasiyana uye saizi, inoenderana nekushandisa chero papi paganda. Ingo namatira kune yechiratidzo algae-yakavakirwa Glitz Glu kana imwe hwaro yesarudzo yako. Mikana yacho haigumi!
Rituel de Fille, yekuchenesa marangi, haasati amboshandisa plastiki-based glitter mune ayo mamwe epasi macandi, pachinzvimbo kusarudza chicherwa-chakavakirwa shimmer inotorwa kubva kune rakachengeteka-girazi re borosilicate uye synthetic mica. Iyo inoshamisa iridescent yedenga gloot soot inogona kushandiswa kuwedzera marasha ekushanduka kune chero chikamu chechiso (kwete chete maziso).
Kubva 2017, UK-based EcoStardust yanga ichigadzira whimsical chirimwa-yakavakirwa cellulose-based glitter misanganiswa, iyo inotorwa kubva kune yakasimbiswa yakakura eucalyptus miti. Yayo yazvino nhevedzano, Yakachena uye Opal, haina 100% epurasitiki, uye yakaedzwa kuti ive inogadziriswa zvachose mumvura nyowani, inova ndiyo yakaoma zvakanyanya kune biodegrade nharaunda. Kunyangwe zvigadzirwa zvaro zvekare zviine chete 92% yepurasitiki, ivo vanogona kuve vachinyanya (asi kwete zvachose) biodegradable mune zvakasikwa nharaunda.
Kune avo vanoda kuve vanopenya zvishoma pasina kunyanyisa kushandisa, ndapota funga izvi zvakavanzika zvinopenya uye zvinowanzo bata kumeso miromo kubwinya kubva ku Beautycounter. Iyo mhando haingowana chete inoitisa mica kubva kupurasitiki-based glittering zvigadzirwa kune zvese zvigadzirwa, asi zvakare inoshingairira kuyedza kuita iyo mica indasitiri ive yakajeka uye ine hunhu nzvimbo.
Kunyangwe iwe usingade kupenya, unogona kuzorora mubhavhu rinopenya. Ehezve, sekunyura kwedu, bhavhu redu rekugezesa rinodzoka rakananga kunzira yemvura, saka zvakakosha kuti urambe uchifunga nezve mhando yechigadzirwa chatinoshandisa kunyorova kwezuva. Lush inopa chigadzirwa kubwinya kweyakagadzirwa mica uye borosilicate panzvimbo pekupenya kwemasikirwo emic mica uye kupenya kwepurasitiki, saka unogona kufema nyore nekuti iwe unoziva kuti nguva yekugezesa haina kungochengetedza nharaunda chete, asi zvakare ine hunhu.
Kutsvaga kupenya kwakapfava, kwete kupenya kupenya? Aether Runako Supernova inosimudza yakajeka. Chinyoreso chinoshandisa hunhu mica uye yakaputsika yadhayamondi yero kuburitsa mwenje wepanyika wendarama.
Pakupedzisira, chimwe chinhu chinoita kuti sunscreen application inakidze! Iyi isina mvura SPF 30+ sunscreen inosanganiswa neinovaka botanicals, antioxidants uye ine hutano mutsere wekupenya panzvimbo yepurasitiki. Iyo mhando yakasimbisa kuti kupenya kwayo kuri 100% biodegradable, yakatorwa kubva ku lignocellulose, uye yakaedzwa yakazvimiririra kuora mukudzikisira mumvura nyowani, mvura yemunyu, uye ivhu, saka zvinonzwa zvakanaka kana zvaiswa mubhegi regungwa.
Kana iwe uchida kugadzira nzara dzako kugadzirira zororo, funga kushandisa kititi nyowani yezororo kubva kune yakachena nzwara yekuchengetedza mhando Nailtopia. Sekusimbisa kwechiratidzo, ese anopenya anoshandiswa mune akaganhurirwa edhisheni mavara ari 100% anogadziriswa zvigadzirwa uye haina chero epurasitiki. Ndinovimba iyi mimvuri inopenya inova chinhu chechigarire mumutsetse wechiratidzo.